आइपीएल २०२० मा ‘फ्लप’ यी ४ स्टार, अब प्लेइङ-११ मा पर्नै मुस्किल! »
Home/खेलकुद/आइपीएल २०२० मा ‘फ्लप’ यी ४ स्टार, अब प्लेइङ-११ मा पर्नै मुस्किल!
आइपीएल २०२० मा ‘फ्लप’ यी ४ स्टार, अब प्लेइङ-११ मा पर्नै मुस्किल!
काठमाडौंः १३औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) क्रिकेट यूएईमा जारी छ। ८ टिम सहभागी लिगमा कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।
गत वर्षको विजेता मुम्बई इन्डियन्स टिमको प्रदर्शन यस वर्ष पनि धेरै राम्रो हुँदै गइरहेको छ। मुम्बई अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ।
जारी लिगमा दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्सर्ज बैंग्लोरले पनि लगातार राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
यसबीच टुर्नामेन्टमा अहिलेसम्म धेरै युवा खेलाडीहरू छन् जसले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। पृथ्वी श, शुभमान गिल, राहुल तेवाटिया, राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल जस्ता धेरै युवाहरूले उत्साह देखाएका छन्।
यसबाहेक अनुभवी खेलाडी विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुलले आफ्नो टिमको लागि राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। यद्यपि त्यहाँ केहि महत्वपूर्ण खेलाडीहरू छन्।
जसको प्रदर्शन एकदम खस्किएको छ। उनीहरुका कारणले गर्दा टिमको सन्तुलन पनि बिग्रँदै गइरहेको छ। आज हामी जारी लिगमा ‘फ्लप’ भएका क्रिकेटरहरुको बारेमा चर्चा गर्दैछौंः
रोयल च्यालेन्सर्ज बैंग्लोरका एक मुख्य अलराउन्डर शिवम दुबेले आइपीएल २०२०को सुरुवात राम्रोसँग गरे। पहिलो दुई खेलमा राम्रो स्कोर गरे। यद्यपि दुबेले पाँच खेलमा ९७ रन मात्र रन बनाउन सकेका छन्।
उनको स्ट्राइक रेट मात्र १२९.३३ छ। आरसीबीले अहिलेसम्म दुई खेलमा पराजय भोगेको छ। यी खेलहरूमा दुबेले टिमलाई कठिन अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि, उनी त्यसमा सफल हनु सकेनन्।
दुबेको ठाउँमा आरसीबीले पवन नेगीलाई टिममा खेलाउन सक्छ। नेगीले बायाँ हाते स्पिनरको रूपमा मात्र सहयोग पुर्‍याउने छैन, तर उनी एक उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान पनि हुन्। नेगीले निश्चित रूपमा आरसीबी टीममा धेरै योगदान दिन सक्दछन्।
दिल्ली क्यापिटल्सले पाँच खेलमध्ये चारमा जित हासिल गरेको छ। ८ अंकसहित दिल्ली दोस्रो स्थानमा छ। यद्यपि, टीमले आश गरेका ब्याट्म्यान शिमरन हेटमारले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। हेटमायर आक्रामक ब्याटिङका लागि परिचित छन्, तर उनको ब्याट यस सिजनमा पूर्ण शान्त छ।
शिमरनले अहिलेसम्म पाँच खेल खेलेका छन्। १२४.३२ को स्ट्राइक रेटमा मात्र ४६ रन बनाएका छन्। उनले ३ नम्बरमा ब्याटिङ गर्ने अवसर पनि पाए। तर, रन बनाउन सकेनन्।
अहिले टोलीले उनलाई फिनिसरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। उनी युएईको विकेटमा धेरै संघर्ष गरिरहेका छन्। त्यसैले उनलाई अब प्लेइङ-११ मा स्थान बनाउन मुश्किल पर्नेछ।
उनको स्थानमा टिमले किमो पल र एलेक्स क्यारीमध्ये एकलाई खेलाउन सक्छ। पललाई टिमले अतिरिक्त बलरको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ। क्यारी राम्रो फिनिसर हुन्, तर उनी पनि कठिन अवस्थामा टिमलाई योगदान दिन सक्दछन्।
जारी आइपीएलमा किंग्स इलावेन पञ्जाबका अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सवेलबाट सबैले राम्रो प्रदर्शनको आशा गरे। यद्यपि, अहिलेसम्म अष्ट्रेलियाका अनुभवी खेलाडी म्याक्सवेलको प्रदर्शनबाट सबै निराश भएका छन्।
यो पञ्जाबको खराब प्रदर्शनको एक कारण पनि हो। म्याक्सवेलले आइपीएल २०२० मा अहिलेसम्म ६ खेल खेलेका छन्। केवल ४८ रन मात्रै बनाएका छन्। उनको स्ट्राइक रेट पनि ८५.७१ छ।
पञ्जाब टिमको मध्यक्रम पूर्ण फ्लप भएको छ। प्रत्येक पटक म्याक्सवेलबाट अधिकतम आशा गर्दा टिम निराश छ। यस कारणले उनलाई पनि अब टिममा पर्न गाह्रो छ।
पञ्जाब टोलीमा क्रिस गेल जस्ता विस्फोटक ब्याट्म्यान छन्। म्याक्सवेल लगातार फ्लप भएपछि गेललाई टिममा समावेश गरिनुपर्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। र, आगामी खेलमा उनको ठाउँमा गेलले मौका पाउने सम्भावना छ।
आइपीएल २०२० मा चेन्नई सुपर किंग्सको प्रदर्शन निरासाजनक छ। यद्यपि टीमको खराब प्रदर्शनको कारण अनुभवी खेलाडीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।
खराब प्रदर्शनको कारण केदार जाधव पनि एक हुन्। जाधवले ६ खेलमा ५८ रन मात्र बनाएका छन्। उनको स्ट्राइक रेट १०० भन्दा कम छ।
जाधव गत वर्ष भारतीय टीमको विश्वकप टोलीका सदस्य थिए। उनी फार्मबाट पूर्ण रूपमा बाहिर रहेको देखिन्छ। केदारले बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङमा राम्रो गर्न सक्छन्। तर, जारी लिगमा उनले त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन्।
कोलकाता नाइट राइडर्सविरुद्धको खेलको अन्त्यमा उनले ब्याटिङ गरेको तरिका एकदम छक्कलाग्दो थियो। यस कारणले गर्दा प्लेइङ-११ बाट बाहिर रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उनको स्थानमा सीएसकेले युवा खेलाडीलाई मौका दिनसक्छ।